Ikhasi - ILizwi eliSiseko • Abapapashi bokuCinga nokuTshabalalisa
Abapapashi BECACISO NOKUPHILA
Ngoku ulungele ukufumana ulwazi olubalulekileyo kuwe njengomntu-olukule ncwadi UkuCinga nokuPhelela nguHarold W. Percival, omnye weengcamango ezinkulu kwi-20th leminyaka. Ukuprintwa iminyaka engaphezu kwamashumi asixhenxe, UkuCinga nokuPhelela Ngenye yezona zityhilelo ezipheleleyo kunye ezicacileyo ezinikwe ebantwini.
Injongo ephambili yale webhusayithi kukukwenza UkuCinga nokuPhelela, kunye nezinye iincwadi zikaMnu. Percival, ezifumanekayo kubantu behlabathi. Zonke ezi ncwadi ziyakwazi ukufundwa kwi-intanethi kwaye zifikeleleke kwiThala leencwadi. Ukuba oku kukuhlola kwakho kokuqala UkuCinga nokuPhelela, unokufuna ukuqala ngeNtshayelelo yoMbhali kunye neNtshayelelo.
Iimpawu zejometri ezisetyenziswe kule ndawo zidlulisela imigaqo ye-metaphysical ebonisiweyo kwaye ichazwe kuyo UkuCinga nokuPhelela. Olunye ulwazi malunga nale miqondiso lungafumaneka Apha.
Nangona imbali isibonisile ukuba abantu bahlala betyekele ekuzukiseni nasekuzukiseni umntu onesiqu sika-HW Percival, yena ngokwakhe wayeqinisekile ukuba akafuni kuthathwa njengomfundisi-ntsapho. Ubuza ukuba iingxelo kwi UkuCinga nokuPhelela ugwetyelwe yinyaniso enomntu ngamnye; ngoko, uphendule umfundi kuye ngokwakhe:
Malunga neHW Percival
YePercival UkuCinga nokuPhelela kufuneka iphelise nakuphi na ukukhangela okunzulu ngolwazi olubhaliweyo malunga nobomi. Umbhali ubonakalisa ukuba uyazi ukuba uthetha ngantoni na. Akukho lwimi lunqabileyo lwenkolo kwaye akukho zinkolelo. Engaqhelekanga kulolu hlobo, uPercival ubhale into ayaziyo, kwaye uyazi into eninzi-ngokuqinisekileyo ngaphezu kwanoma yimuphi umbhali owaziwayo. Ukuba uyazibuza ukuba ungubani, kutheni ulapha, ubunjani bendalo iphela okanye injongo yobomi emva koko uPercival akazukuyeka ... Zilungiselele!
Iindlebe zabafundi bethu